बैंकिङ परीक्षा तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ~ Banking Khabar
बैंकिङ परीक्षा तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भइरहेको हुन्छ । आवेदन पनि थुप्रै पर्ने गर्छ । तर, छनौटका क्रममा बैंकहरुले आफूले खोजेजस्तो आवेदक नपाएको गुनासो गर्छन् । यता, आवेदकहरु आफू किन छनौट भइएन भन्नेमा अलमल पर्छन् ।
कुनै पनि बैंकमा जागीर खानको लागि लिखित परीक्षाको तयारी गर्दा थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकहरुले भ्याकेन्सी खालेका छन् भने परीक्षाको तयारीका लागि पाठ्यक्रम पनि उपलब्ध गराएका हुन्छन् । निजी स्तरका बैंकहरुले पनि लिखित परीक्षामार्फत कर्मचारी छनौट गर्दैछन् भने सोही अनुरुप तयारी गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त तपाईँ कुन पदको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पदमा रहेर तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी केके छन् भन्ने कुरामा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, बैंकिङ परीक्षाको तयाी गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्दछः
बैंकमा जागीर खाने सोच बनाउनेवित्तीकै तपाईँ पहिले नेपालमा बैंकको सुरुवात कहिले र कसरी भयो? बैंकको सुरुवात हुनुअघि कसरी कारोबार हुन्थ्यो ? बैंकको सुरुवातदेखि हालसम्म केकस्ता परीवर्तनहरु भएका छन् ? लगायतका विषयमा खोजी खोजी अध्ययन गर्नुहोस् ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । यो विषयमा तपाईँ जानकार पक्कै हुनुहुन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको बारेमा तपाईँलाई अरु केके थाहा छ ? यसको स्थापना, हालसम्मका गभर्नरहरु, गभर्नर एवम् डेपुटी गभर्नरको निकाय, राष्ट्र बैंकका कार्यहरु, विभागहरु लगायतका विषयमा पनि जानकारी लिनुहोस् ।
बैंक कसरी संचालन हुन्छ ? सर्वसाधारणहरुबाट पैसा लिएपछि व्याज कसरी दिन्छ ? ऋणीहरुलाई ऋण कसरी प्रदान गर्छ ? अन्य केके काम बैंकबाट हुन्छ ? यस्ता सबै जानकारी पनि तपाईँसँग हुनुपर्छ । त्यस्तै, शेयर बजार, बीमा, रेमिट्यान्स लगायतसँग बैंकको सम्बन्ध पनि जान्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र निश्चित ऐन तथा नीति अन्तर्गत रहेर चलेको हुन्छ । हाल कुन ऐन तथा नीति अन्तर्गत रहेर राष्ट्र बैंकले बैंक् तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।
हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्छ । सोही अनुसार, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले लिएका लक्ष्यका साथै मौद्रिक नीतिको पनि गहन अध्ययन गर्नुहोस् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । कहिले व्याजदर सम्बन्धमा, कहिले मर्जर सन्दर्भमा वा अन्य विषयमा । यस विषयमा जानकारी लिइरहनुपर्दछ । राष्ट्र बैंकले केकस्ता निर्देशन जारी गर्यो र किन भन्ने विषयमा थाहा हुनुपर्दछ ।
देशको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा त जान्नुपर्छ नै । साथमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय बजारमा केके भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी लिइरहनुपर्छ । विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी जस्ता संस्थाको सल्लाह सुझाव लगायत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रवाभ पार्न सक्ने हरेक कुराहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको बैंकको बारेमा तपाईँलाई केके थाहा छ ? स्थापना, वित्तीय अवस्था, शाखा संजाल, अध्यक्ष, सीईओ लगायतका साथै बैंकले प्रदान गर्ने सेवा, व्याजदर लगायतका विषयमा जानकारी लिनुहोस् ।
बैंकमा जागीर खानको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कुराको जानकारी चाहिन्छ । यस्ता जानकारीहरु समावेश गरिएका पुस्तकहरु बजारमा पाइन्छन् । पुस्तकमा नपाइएका कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइटमा पाइन्छ । समसामयिक जानकारीका लागि समाचार हेर्नुपर्छ । बैंकसम्बन्धी जानकारीका लागि बैंकको वेभसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ ।